मकवानपुरमा पूर्व आर्मीको कसले लि'यो ज्या' न ? श' व अन्त्यष्टि गरिसकेपछि खुल्यो यति ठूलो र' हस्य (भिडियो हेर्नुस्) - Onlines Time
मकवानपुरमा पूर्व आर्मीको कसले लि’यो ज्या’ न ? श’ व अन्त्यष्टि गरिसकेपछि खुल्यो यति ठूलो र’ हस्य (भिडियो हेर्नुस्)
मकवानपुर मनहरी ६ चुलाचुलीमा पूर्व आर्मी अजय सुनार विक साथीहरुसंग तास खेल्न गएका थिए । तर उनी भोलीपल्ट रहस्यमय निधन भएको अवस्थामा फेला परेका छन् ।
तसर्थ, हामी तपाईंलाई केहि तरिकाहरू बताउँछौं जसद्वारा तपाईं आफ्नै बोट बिरूवा उमार्न सक्नुहुन्छ । हामी घरमा गुलाफ रोप्न सिक्ने तरिकाबारे आज जानकारी दिन गइरहेका छौँ । सबैजनालाई दिनहुँ मनपर्दछ र सबैजना चाहान्छन् कि घर गुलाफको सुगन्ध जस्तो सुगन्धको आभास । यो एक अचम्मको विचार हो, तर तपाईं बगैंचा बिना घरमा गुलाफ रोप्न सक्नुहुन्छ । त्यसो भए आउँनुहोस् सुरू गरौं ।
गुलाफ रोप्नका लागि आवश्यक सामग्री
हामीलाई गुलाब उब्जनी गर्न धेरै चीजको आवश्यक छैन । हामी यसलाई थोरै लागतमा घरमा बनाउन सक्छौं । सामग्रीलाई हेरौं ।,,, भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
आलुमा गुलाफ लगाउने विधि
पहिले गुलाबको फूल लिनुहोस् र त्यसका पातहरू हटाउनुहोस्।यसको माथिल्लो भाग काट्नुहोस्।एउटा आलु लिएर यसमा प्वाल बनाउनुहोस्। त्यो प्वालमा गुलाबको डाँठ राख्नुहोस्।अब माटोको भाँडाको आधा भाग भर्नुहोस् र त्यसमा आलुहरू राख्नुहोस्।बाँकी भाँडो माटोले भर्नुहोस्।
एउटा प्लास्टिकको बोतल लिनुहोस् र यसलाई तलबाट काट्नुहोस्।बोतल गुलाब पेटीओलमा लगाउनुहोस्।उसलाई हरेक दिन पानी दिनुहोस् र एक हप्ता पछि हेर्नुहोस्।तपाईले यस प्रकारको गुलाब कहिल्यै देख्नुहुने छैन। त्यहाँ जरा पात आइसकेको हुन्छ । सप्रियको गुलाफले पूल चाँडै दिनेछ ।पूरा भिडियो हेर्नुहोस् र फेन्युटासका साथ चरणबद्ध गुलाफ फूलाउने आलुमा कसरी राख्ने सिक्नुहोस् । एक हप्ता पछि, फूल यस गुलाफ डाँठबाट फुल्न थाल्छ । तपाईं यो देखेर धेरै खुसी हुनुहुनेछ ।
Prevगलत सुइ लगाएका कारण छोरी जन्मिएपछि दम्पतीले पाए १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ !
Nextसंसारका सबभन्दा धनी अम्बानीको कसरी सकि’यो सम्पत्ति, गहना सबै बेचियो, पकेट खर्च श्रीम’तिबाट !